China Car ụlọ Pedal 7904 rụpụta na Factory | Sebter
Universal ụgbọ ala multifunctional pedal Car pedals aluminum alloy ụzọ pedals n'elu ụlọ pedals ụgbọ ala mgbanwe onunu 7904SBT
Ọrụ ụkwụ ụkwụ: Ngwunye ụkwụ ụkwụ na-arụ ọrụ dị iche iche bụ ihe inyeaka maka onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ụgbọ ala na-apụ (ụdị ụgbọ ala SUV) na ịrịgo n'elu ụlọ ụgbọ ala. Onbanye n’elu ụlọ abụghịzi nsogbu! Okwesiri maka iburu akpa n’elu ụlọ, na-eme mkpakọrịta nwoke na nwanyị n’elu ụlọ, na-ahụ ihe nkiri n’elu ụlọ, agbapụ n’elu ụlọ na ebe ndị ọzọ.
Mgbanwe nke ihu nke ọnụ ụzọ na azụ ọnụ ụzọ: Ọ bụrụ na efere ihu akụkụ nke ụzọ ụgbọ ala ahụ, kpọghee mgbanaka mgbanaka na ọrụ nchịkwa iji dozie akụkụ nkedo nke pedal ma dị mfe ịzọ ụkwụ.
Uwe okpukpu abụọ na-eme ka mpempe akwụkwọ na-eme ka okpukpu abụọ: :kwado akpụkpọ ụkwụ okpukpu abụọ nke nwere onwe ya na-enye nchebe ọzọ maka ebe kọntaktị ahụ, ọ bara uru ma ghara imerụ ụgbọ ala ahụ.
Onye na-echekwa nchekwa nwere ọrụ windo mebiri emebi: Isi nwere onwe ya isi mkpuchi nchekwa, nke a na-etinye na silica gel ma nwee ike iji ya mee ihe ozugbo mebiri windo na-enweghị nkwụsị.
Ọrụ mgbochi imegharị ụkwụ ụkwụ: Platụkwasị pedal ahụ n'ụzọ kwụ ala n'ihu ma ọ bụ mgbe wiil ahụ nwere ike igbochi ụgbọala ahụ ịmịgharị, nke kwesịrị ekwesị maka ụdị ngosi ọ bụla ebe ụgbọala nwere ike ịmịchasị chọrọ ka edozi ya.
Product aha: ụgbọ ala ọhụrụ eluigwe na ala multifunctional pedal
Ihe: Aluminom Alloy + Silicone
Dị dị mma: eluigwe na ala
Ọdịdị nha: 160 * 80 * 35 mm
Single ngwugwu size: 175 * 88 * 38 mm
Arọ: 340g / mpempe
Agba: ọlaọcha, nwa, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ,
Ihe ndi ozo: nchekwa hama, onye na-ejide ekwentị mkpanaaka, wheel mgbochi skid bracket
Anyị na-na-ọkachamara na melite ihe management na QC usoro ka anyị wee na-ejigide kemmenyeujo ihu n'ime fiercely-asọmpi obere azụmahịa Auto Parts Nzọụkwụ Pedals, Anyị na-adịghị afọ ojuju na ugbu rụzuru ma anyị na-agbalị kasị mma innovate izute asịwo si ihe ndi ozo choro. N'agbanyeghị ebe ị si, anyị na-ebe a na-eche gị obiọma arịrịọ, na-anabata ileta anyị factory. Họrọ anyị, ị ga - ezute onye na - ebubata ngwa ahịa gị.
Hot ire Factory ụlọ pedal, site na tụnyere n'ichepụta na mba ọzọ ahia ndi, anyị nwere ike ịnapụta ngụkọta ahịa ngwọta site na-ekwe nkwa nnyefe nke nri ngwaahịa na ngwọta na-nri ebe na nri oge, nke a na-akwado site na anyị ukwuu ahụmahụ, ike mmepụta ikike, agbanwe agbanwe, iche iche Pọtụfoliyo na njikwa nke ụlọ ọrụ na-emekarị yana anyị tozuru okè tupu na mgbe ọrụ ahịa. Ọ ga-amasị anyị ịkọrọ gị echiche anyị ma nabata azịza na ajụjụ gị.
Nke gara aga: Kpochapụrụ na Static Eliminator 0903A
Osote: 3413 nkpuchi mpịaji mpịachi